UPhillips kunye ne-AOC bahlaziya ukuzibophelela kwabo ekuqhubekeni nokukhokela kwintengiso yokubeka esweni | Iindaba zeGajethi
UKarim Hmeidan | | Umfanekiso kunye nesandi, Iziphaluka
Thetha nge iimonitha Ngumcimbi onzima, ngakumbi ukuba sithathela ingqalelo ukuvela kolu hlobo lwentengiso kwimbali yezobuchwepheshe. Kwaye yintengiso eyahluka kakhulu, kuxhomekeke kumsebenzisi wokugqibela. Ayisekho into yokuba singaze sitshintshe esweni, sokujolisa konke "kumgangatho" wokumamela kumabonwakude emakhayeni ethu. Namhlanje sineemonitha zazo zonke izinto esizithandayo: ukubeka iliso kubasebenzisi abaqhelekileyo, kubadlala umdlalo, kwiingcali zoyilo, kuye nakubani na ofuna indawo ...
Kwaye ukuba sithetha ngayo UPhillips sithetha ngomgangatho. Inkampani yaseYurophu eyaziyo indlela yokwenza kakuhle kakhulu ukusukela kwiminyaka yakutshanje ikwazile ukwandisa uluhlu lweemveliso zazo zonke iintlobo zomsebenzisi wokugqibela, ukuya kuthi ga kwinqanaba lokuba lenze I-AOC yelizwe lokudlala, Abasebenzisi abakhoyo ngoku abafuna ezona zininzi ngokubhekisele kwiimonitha. Emva kokutsiba siza kukuxelela zonke iindaba ezivela kumakhwenkwe UPhillips kunye ne-AOC kunyaka olandelayo we-2018, unyaka apho imakethi yokubeka esweni iya kuqhubeka ngokuvela ngokuxhuma kunye nemida.
Ngokubhekisele kwimakethi yaseSpain, kufuneka kuthiwe ibikhona kwikota yesibini ka-2013 xa intengiso yokujonga iliso yaqala ukukhula. Imakethi ethathe isigqibo sokushiya iimonitha ezindala nge-intshi ezili-17 okanye ngaphantsi, ukuya yenza umtsi kwii-intshi ezingama-24 (okwangoku kuthengiswa kakhulu) Ngokucacileyo izixhobo ezitsha ezineeprosesa ezinkulu zemizobo kuthetha ukuba singaya phambili kwaye sitsibe into engcono ibingaphezulu kokudingekayo.
1 UPhillips: uyilo lomfanekiso, umgangatho kunye nokuthembeka
2 I-AOC AGON: ukuhlengahlengisa iimveliso kubathengi abafuna kakhulu
UPhillips: uyilo lomfanekiso, umgangatho kunye nokuthembeka
Uluhlu lwe UPhillips ukwazile ukugxila kuyilo yeemonitha kakuhle. Namhlanje Iilaptops okanye iidesktops zinokuyilwa okumangalisayo, kwaye ukubek'esweni akunakuba kuncinci. Inkqubo ye- Umgangatho womfanekiso uyamangalisa kwaye banokuzenzisa ukuze basungule ubungakanani obungapheliyo kubandakanya ubungakanani bepaneli njengale ikumfanekiso ongentla.
Kodwa ukuba kukho into enokusenza sithathe isigqibo kwiliso elinye okanye kwelinye, ngamava abasebenzisi bokwenyani. Ekubonisweni koluhlu olutsha siye sanethuba lokudibana Bnomio, Omnye wabayili bemizobo abaziwayo ngalo mzuzu (enye yezinto azenzileyo zamva nje ziliqela Iimpawu zegeostickers ye-Instagram). I-Bnomio yaqaqambisa imibala ehanjiswa ngabagadi be-Phillips kunye nokusebenza kwabo: I-USB-C edityanisiweyo ukuze sikwazi ukuqhagamshela intambo kwiikhompyuter zethu (Konke ukugxekwa kwenkampani ethile kuza engqondweni ukugxila kuluhlu lweemveliso zekhompyuter kule USB-C), IiKhamera zeWebhu eziKhuselweyo (singayifihla ngokwasemzimbeni kuye nabani na owoyikayo abahlaseli), kunye nenani elingenasiphelo leempawu ezidityaniswe kuyilo olukhulu. Ewe, ungazola, iimonitha ezintsha zePhillips zisusa ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka (iyingozi kwamehlo) kusetyenziswa isoftware kunye nezixhobo.
I-AOC AGON: ukuhlengahlengisa iimveliso kubathengi abafuna kakhulu
Ukudlala kwimfashini, kwintengiso yabasebenzisi abafuna ukubekwa kweliso kwiimpawu zomdlalo wevidiyo abadlalayo. Lumka, asithethi ngabagadi beekhompyuter kuphela, ii-consoles namhlanje zisetyenziswa kunye nokujonga Kungenxa yoko le nto i-AOC AGON (uluhlu lwemidlalo ye-AOC) luza nezinto ezintsha njengokufakwa kwetekhnoloji INvidia G-Sync kunye ne-AMD Freesync. Ukuphuculwa kweliso lokuhlaziya amaxabiso ukuya kuthi ga I-240Hz ngamaxesha okuphendula ee-1ms nje. Izikrini ezinkulu ezifikelela kumgangatho wepanoramic kwezona zifunwa kakhulu.
Kwaye njengakwimeko yangaphambili, UKevin Ariel Alpire U-Rivero, oyinxalenye yeQela-Fen1x e-ezemidlalo i-LVP yecandelo lesibini kunye neentshatsheli zaseSpain 2 LoL, usixelele ngeemfuno anazo xa ekhetha ukubek 'esweni okanye enye: Ixabiso lokuhlaziya elingakholekiyo le-AOC AGON, kwaye ngaphezulu kwayo yonke Itekhnoloji yeSoftBlue ukuphelisa ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka ngakumbi xa uphambi kokubek 'esweni iiyure ezininzi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umfanekiso kunye nesandi » UPhillips kunye ne-AOC bahlaziya ukuzibophelela kwabo ekuqhubekeni nokukhokela kwimakethi yokubek'esweni
I-Bolt B80, i-SSD yangaphandle, enamanzi kwaye intle